Somaliland oo War Farxad leh oo la Xidhiidha Shidaal-qodista ka heshay Shirkadda Genel | Salaan Media
London:5-aug-2013 (SM)Shirkadda baadhista iyo soo saarista Genel ayaa shaacisay iney rajo wanaagsan ka qabto shidaal laga soo saaro deegaanada Somaliland oo sahaminteeda ka bilowday muddo aan sidaas u sii fogayn.
Wargeyska Telegraph ee Dalka England oo warbixin ka diyaariyay howsha sahaminta shidaal ee Genel ka hayso Somaliland, ayaa waxay warbixintu sheegeysaa in horumar ballaadhan laga sameeyay howshaasi isla markaana ay rajeyneyso in bilowga sanadka 2014 ceelka ugu horeeya ka qodo Somaliland.
Warbixinta Wargeys ayaa tilmaameysa in shirkadda Genel ay dalal ay ka mid tahay Marooko, Malta ay ka fileyso dhamaadka sanadkan iney ka bilowdo qodista saliida shidaalka, iyadoo shirkadda ay xoogga saareyso dalalka aan weli la sahamin sida Somaliland oo kale.
“Sannadka soo socda, Genel waxay ka qodi doontaa ceelka ugu horeeya Somaliland oo ku taala bariga Afrika, xorriyaddeeda dib ugala soo noqotay Soomaaliya labaatan sanno ka hor, waxayna la mid tahay Somaliland sahaminta la sameeyayna ay la mid tahay tan dalka Yeman” ayuu Wargeyska Warbixintiisa ku yidhi.
Madaxa shirkadda Genel ayaa waxaa madax ka ah Tony Hayward oo ah guddoomiyihii hore ee shirkadda BP, waana shirkadda ugu ballaadhan ee shidaalka ka soo-saarta gobolka is-maamul hoosaadka Kurdiyiinta Ciraaq.
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa arinta shidaal qodista Somaliland muran geliyay, wuxuuna ugu digay ineysan dhul aysan laheyn ku deg dego iney shidaal ka baarto.
Warkan ay warbaahinta u sheegtay shirkadda Genel, ayaa waxa uu farxad weyn u yahay dhamaanba dadka reer Somaliland oo harraad ba’an u qaba inay mar uun arkaan dalkooda oo laga helay shidaal walow dhibicba ha ahaatee.